Paroasy Anjomakely : Ekar Mb Anne Anjomakely – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Ny Père Curé eto amin’ny EKAR Mb Anne Anjomakely dia faly miarahaba anareo izay tonga mitsidika anay amin’ny alalan’izao tranokalam-pifandraisana izao. Dingana iray goavana izay mipetraka ho tantara eto amin’ny Fiangonantsika ny nahafahana manokatra ity tranonkala ity, ary antenainy fa hanokatra sy hampivelatra ny fitoriana ny Vaovao Mahafaly, manaraka ny fandrosoan’ny teknolojia.
Isan’ny tanjona amin’izao ihany koa ny mba ahalalantsika na ny eto an-toerana na ny any am-pielezana rehetra any ny fiainan’ny Fiangonantsika, ahafahan’ny tsirairay mifanome tanana amin’izay tetik’asa heverina ho tanterahina.
Nanomboka tamin’ity taona ity dia nahaleotena ny Fiangonana Mb Anne Anjomakely, tsy niankina ara-pitantanana amin’ny Distrika Ambohijanaka intsony, izany dia noho ny fisian’ny « asa lehibe » sahanin’ndry Masera ao amin’ny « Fraternité Sainte Thérèse » Ambohipiadanana, dia ny fikarakarana ireo « zaza kamboty» maro, izay mbola ho avy miandalana ny fanazavana ny an-tsipiriany.
Hiezaka izahay ny hampahalala anareo manomboka izao ny vaovao tsara ho fantatra rehetra mikasika ny fiainam-piangonantsika. Ny isam-pikambanana masina sy ny vaomiera rehetra misy ato amin’ny Fiangonana dia hampahafantatra amintsika ny momba azy sy ny ezaka tiany ho tratrarina sy ny faniriany eo amin’ny fifanakalozana traik’efa.
Mankasitraka sahady amin’izay rehetra fiaraha-miasa, ho tahin’Andriamanitra isika, ka ho soa sy ho tsara anie ity taona vaovao 2014 ity, ary ny tso-drano mahery avy amin’Izy Tompo hirotsaka amintsika tsirairay sy ny tokantrano rehetra indrindra ireo izay mazoto mifandray aminay amin’ny alalan’izao tranonkala fifandraisana izao.
Misaotra ny équipe mass media ary vonona handray ireo izay vonona hiara-miasa rehetra.
Ny Père Curé RANDRIANJATOVO Jacques Léonce
Tel : 034 01 701 77 / 033 11 717 00
Ad mail : randriajacques@yahoo.fr
Ho fanombohana ho anareo izay maniry hamaly ireo fanontaniana mikasika ny fanontaniana momba ny synode an’ny Eveka momba ny fianakaviana dia atolotra anareo ny « texte » sy ny « fanontaniana », dia misaotra mandefa ny valiny amin’io adresy mail io.